Izindlela zeComWales zokukhokha
Lapho ukhetha indlela yokukhokha, Sibheka izinketho ezilula, eziphephile nezingalandeleka uma kunezinkinga. Sebenzisa ithebula elingezansi ukuqhathanisa izindlela zokukhokha.
I-PayPal iyindlela yokukhokha oyithandayo yabathengi nabathengi abaningi be-eBay. I-PayPal ikuvumela ukuthi uthumele izinkokhelo ngokushesha nangokuphepha online usebenzisa ikhadi lesikweletu noma i-akhawunti yasebhange.
Funda kabanzi mayelana ne ukukhokha nge-PayPal.
√ Inkokhelo iyalandeleka. Ungasilandelela isimo sokukhokha kwakho usebenzisa i-akhawunti yakho noma i-akhawunti yakho ye-PayPal.
√ Ukukhokha kungukuthenga okwenziwe kuqala okugunyaziwe futhi uma konke kuhamba kahle sizobamba inkokhelo yakho lapho into yakho ihanjiswa. Ukhokha ngokuqondile kusuka ekuphumeni futhi inkokhelo ifakwa ngqo kwi-akhawunti yethu.
√ Akudingi ukuthi usebenzise ikhadi lakho lesikweletu nge-inthanethi. Ungadlulisa ngqo kwi-akhawunti yakho yasebhange.
√ Uma usebenzisa ikhadi lesikweletu, abathengisi abayiboni inombolo yakho yekhadi lesikweletu. Ibethelwe ngokuphepha ngokusebenzisa iseva ye-PayPal ukuze ubungozi bokusebenzisa okungagunyaziwe bunqunyelwe.
√ Izipesheli Yokubuyiselwa imali ehlanganisa inani lentengo ephelele yokuthenga nezindleko zangempela ze-P & P ekuthengiselweni okufanele. Bona imigomo nemibandela ephelele
Credit ikhadi noma ikhadi lasebhange
Semukela amakhadi esikweletu noma ekhadi lokudonswa kwemali nge-akhawunti yethu ye-PayPal.
√ Inkokhelo iyalandeleka. Ungasilandelela isimo sokukhokha kwakho usebenzisa i-akhawunti yakho yekhadi lesikweletu.
√ Ukukhokha kungukuthenga okwenziwe kuqala okugunyaziwe futhi uma konke kuhamba kahle sizobamba inkokhelo yakho lapho into yakho ihanjiswa.
√ Inikeza ukumbozwa kwesikweletu esilinganiselwe. Izinkampani zamakhadi wesikweletu zivame ukuhlinzeka ngezinga elithile lokuzazi nokuvikelwa kokuthenga. Xhumana nenkampani yamakhadi wakho wesikweletu ukuze ufunde kabanzi.
Kufanele uthayiphe imininingwane yekhadi lakho lesikweletu kuwebhusayithi yePayPal ngaso sonke isikhathi uma u-oda lapho ungenayo i-akhawunti.
I-oda lokuthenga elisemthethweni
Manje inkampani, uhulumeni nezinye izikhungo ezisemthethweni zingasebenzisa le ndlela.
√ Izinsuku ezingama-60 okufanele ukhokhelwe
√ Imikhawulo yesikweletu engama-5k kuya kwezigidi.
√ Ukusethwa kosuku olufanayo nokuvunywa
√ Siza ukuhamba kwakho kwemali ngemali ephakeme ngezinsuku ezingama-60.
√ Phatha i-akhawunti yakho ku-inthanethi futhi ukhokhe ngokudonswa kwemali eqondile.
X Izindleko eziphansi ezingama-2.33% zakhokhwa ku-invoice ngayinye.
X Uzodinga i-oda elisemthethweni.
X Kancane kunezindlela zokukhokha nge-elekhtronikhi (ukuvunywa nokusethwa kuvame ukusebenza ngosuku olufanayo)
Ngaphezu kwezinye izindlela zokukhokha ezivunyelwe, sinikeza futhi le nketho.
√ Ithuba lokuhlola into ngokwakho ngesikhathi sokukhokha
√ Yonga umzamo nezindleko zokuposa.
√ Abathengi bangasebenzisa noma iyiphi indlela yokukhokha, kufaka imali, i-PayPal, noma ikhadi lesikweletu.
X Kufanele ixhumanise indawo yokuqoqa nesikhathi nesitolo.
X Uzodinga i-ID yezithombe zikahulumeni
X Kancane kunezindlela zokukhokha ngogesi
X Ukuvikelwa kuyahluka ngendlela yokukhokha.
X Uma wangakini uphuthelwa ukuhanjiswa kwendawo kwamahhala ezintweni eziningi.
Uma uthenge umkhiqizo we-telecom noma inkontileka yokuxhaswa sidinga umyalo oqondile wedebithi.
Bhalisa manje ukuze ukhokhe ngokudonswa kwemali ngqo.
√ Thumela i-imeyili njalo ngenyanga yenkokhelo ezayo
√ Umbozwe ngaphansi kwe uhlelo oluqondile lokudonswa kwemali ebanjwayo
X Ibhange lakho lingakushaja imali uma ungenamali eyanele ku-akhawunti yakho.
Ukudluliselwa Kwebhange (Izinkokhelo Ezisheshayo e-UK)
√ Ama-oda angathunyelwa kumakheli weqembu lesithathu u-Ek. sebenza, uqondise ikhasimende lakho kanye nezipho eziya emndenini
√ Amasheke amaningi, amabhange amaningi anikezela ngezinsizakalo zokukhokha uma ngabe kuvela izinkinga ngaphambi kokuthi isheke lihlawulwe. Ezinye izinsiza zokuposa ngeposi nazo zingaba nenketho yokumisa ukukhokha uma kuvela izinkinga ngaphambi kokukhokhwa kwemali.
√ Ngokudluliselwa kwebhange, ukukhokha kufakwa ngokushesha kwi-akhawunti yomthengisi.
X Isikhathi sokulungiselela kancane kancane ngenkathi amasheke enziwe ekukhokhelweni kwakho.
X Ngembuyiselo sizokuthumela isheke.